MB ၂၀၁၈ စက်တင်ဘာ - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဘုရားကျောင်း
ကြှနျုပျတို့အကွောငျး > ဂျေ Tkach ကနေန်ထမ်းပေးစာ > ကို MB 2016 စက်တင်ဘာလ
တံပိုးနေ့ - ခရစ်တော်၌ပြည့်စုံသောပွဲတော်
စက်တင်ဘာလတွင် (ယခုနှစ်တွင် ထူးခြားသည်။ 3. အောက်တိုဘာလ [ဃ။ Üs]) ဂျူးလူမျိုးများသည် ဟေဗြဲဘာသာဖြင့် "နှစ်၏ဦးခေါင်း" ဟူသော "Rosh Hashanah" နှစ်သစ်ကူးနေ့ကို ကျင်းပကြသည်။ နှစ်၏ဦးခေါင်းပုံဆောင်သော ငါးခေါင်းတစ်ပိုင်းကို စားကြသည့် ဂျူးရိုးရာဓလေ့၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး၊ အဓိပ္ပါယ်မှာ "ကောင်းသောနှစ်ဖြစ်ပါစေ!" နှုတ်ဆက်စကားဆိုလိုသည်။ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ၊ Rosh Hashanah ၏ပွဲနေ့နှင့် ဘုရားသခင်သည် လူကိုဖန်ဆင်းခဲ့သော ဖန်ဆင်းခြင်းရက်သတ္တပတ်၏ ခြောက်ရက်မြောက်နေ့ကြားတွင် ဆက်စပ်မှုရှိသည်။
ဟေ​ဗြဲ​ကျမ်း​စာ​၌​လည်း​ကောင်း၊ 3. မောရှေကျမ်း ၂3,24 ထိုနေ့ကို "Sikron Terua" ဟုခေါ်ပြီး " Trumpet Bubbles with Memorial Day" ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ထို့ကြောင့် ဤနေ့ကို အင်္ဂလိပ်လို တံပိုးမှုတ်ပွဲတော်ဟု မကြာခဏ ခေါ်ဆိုကြပါသည်။ ရဗ္ဗိအများစုသည် ရော့ဟာရှနဟ် (သိုးထီး၏ဦးချိုမှပြုလုပ်သောတံပိုး) တွင် မေရှိယကြွလာမည့်မျှော်လင့်ချက်ကို အချက်ပြရန် အကြိမ် 100 အပါအဝင် အနည်းဆုံး အကြိမ် 30 မှုတ်ခဲ့ကြောင်း ရဗ္ဗိများစွာက သွန်သင်သည်။ ကျွန်တော့်မှာ shofar တစ်လုံးပိုင်ဆိုင်ထားပြီး မှတ်စုထုတ်ဖို့ဆိုတာ လုံးဝခက်ခဲတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ Rosh Hashanah ပွဲတော် ဝန်ဆောင်မှုတွင် ပထမသူသည် လိုအပ်သော တံပိုးအချက်ပြမှု အရေအတွက်ကို မမှုတ်နိုင်သောအခါတွင် လေ့ကျင့်ထားသော အစားထိုးလဲလှယ်ရန် ထုံးစံအတိုင်း ဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်ဖတ်ရပါသည်။
ဂျူးသတင်းရပ်ကွက်အဆိုအရယနေ့ခေတ်မှုတ်သံ ၃ မျိုးရှိသည်။
Teki'a - ဘုရားသခင်ရဲ့ ခွန်အားကို မျှော်လင့်ခြင်းရဲ့ သင်္ကေတအဖြစ် ရှည်လျားတဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ် လေသံ၊
Shevarim - အပြစ်နှင့်ပြိုလဲသောလူသားများအတွက်ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းနှင့်သင်္ကေတတိုတောင်းသောပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းတန်ချိန်သုံးခု၊
Teru'a - ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှောက်သို့ ရောက်လာကြသူများ၏ ကြေကွဲသောနှလုံးသားများကို ကိုယ်စားပြုရန်အတွက် အမြန်၊ စတက်ကာတိုနှင့်တူသော အသံကိုးခု (နှိုးစက်သံနှင့် ဆင်တူသည်)။
Teru'a နှင့် ပတ်သက်၍ Talmud က "အောက်က (ကြေကွဲသောနှလုံးသား) မှတရားစီရင်ခြင်းခံရလျှင်, အထက်မှတရားစီရင်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး" ။ Rabbi Moshe Ben Maimon (Maimonides ဟုခေါ်သည်) သည် အလယ်ခေတ်၏ အရေးအကြီးဆုံး ဂျူးပညာရှင်နှင့် ဆရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပြီး အောက်ပါအရေးကြီးသောအရည်အချင်းများကို ထပ်လောင်းဖော်ပြထားသည် ။
ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာလျှင်ကျွန်ုပ်၏ဘုရင်ဖြစ်ရုံနှင့်မလုံလောက်ပါ။ အကယ်၍ လူသားအားလုံးသည်ဘုရားသခင်ကိုဘုရင်အဖြစ်အသိအမှတ်မပြုပါကဘုရားသခင်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဆက်ဆံရေးတွင်တစ်ခုခုပျောက်ဆုံးနေသည်။ အနန္တတန်ခိုးရှင်ကိုငါချစ်သောကြောင့်၎င်း၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါကများသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အခြားသူများအပေါ်ကျွန်ုပ်၏နက်ရှိုင်းသောစိုးရိမ်မှုကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဘုရားသခင့်အုပ်ချုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ခံစားချက်ကိုလည်းအကျိုးသက်ရောက်သည်။
[တံပိုးမှုတ်ခြင်း - ရုပ်ပုံချဲ့ခြင်း] ရှေးဣသရေလလူမျိုးများသည် ၎င်းတို့၏တံပိုးမှုတ်ရန်အတွက် သိုးချိုများကို မူလကအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် ခဏကြာတော့ ဒါတွေက ငါတို့လို ဖြစ်လာတယ်။ 4. ငွေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော တံပိုးခရာ (သို့မဟုတ်) တံပိုးများဖြင့် အစားထိုးသည့် မောရှေ ၁၀ ကို လေ့လာခဲ့သည်။ တံပိုးအသုံးပြုခြင်းကို ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ၇၂ ကြိမ်ဖော်ပြထားသည်။ သူတို့သည် အမျိုးမျိုးသော အခါသမယများတွင် မှုတ်ထုတ်ခံရသည်- အန္တရာယ်ကို သတိပေးရန်၊ ပွဲလမ်းသဘင် အစည်းအဝေးတစ်ခုအတွက် လူများစုဝေးစေရန်၊ ကြေငြာချက်များ ထုတ်ပြန်ရန်နှင့် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရန် ခေါ်ဆိုမှုအဖြစ်၊ စစ်ဖြစ်ချိန်များတွင် စစ်သားများအား ၎င်းတို့၏ တာဝန်အတွက် ပြင်ဆင်ရန် တံပိုးများကို အသုံးပြုပြီး တိုက်ပွဲဝင်ရန် အချက်ပြပေးသည်။ ရှင်ဘုရင် ကြွလာကြောင်းကိုလည်း တံပိုးမှုတ်ပြီး ကြေငြာခဲ့သည်။
ယနေ့ခရစ်ယာန်အချို့သည်တံပိုးနေ့ကိုဓမ္မပွဲတစ်ခုအဖြစ်ကျင်းပသောပွဲတော်အဖြစ်ကျင်းပကြသည်။ ၎င်းသည်အနာဂတ်၏အဖြစ်အပျက်များဖြစ်သည့်ယေရှု၏ဒုတိယအလာတော်မူခြင်းသို့မဟုတ်ဘုရားကျောင်း၏ပီတိဖြစ်ခြင်းတို့နှင့်ပေါင်းစပ်လေ့ရှိသည်။ ဤပွဲတော်၏အနက်ဖွင့်ဆိုချက်များသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိလှသည်ဖြစ်ရာဤပွဲတော်မှညွှန်ပြသောအရာသည်သခင်ယေရှုပြည့်စုံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ကိုသူတို့လျစ်လျူရှုကြသည်။ ငါတို့သိသည့်အတိုင်းတံပိုးနေ့ပါဝင်သောပcovenantိညာဉ်ဟောင်းသည်ခေတ္တယာယီဖြစ်သည်။ လာမည့်မေရှိယကိုလူတို့အားကြေညာရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ သူ၏အမည်များမှာပရောဖက်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်၊ ပညာရှိနှင့်ဘုရင်ဖြစ်သည်။ Rosh Hashanah အပေါ်တံပိုးမှုတ်ခြင်းသည်Israelသရေလနိုင်ငံတွင်နှစ်စဉ်ကျင်းပသောပွဲတော်ပြက္ခဒိန်၏အစကိုပြရုံသာမက“ ငါတို့ဘုရင်လာပြီ!” ဟူသောပွဲတော်နေ့၏သတင်းကိုလည်းကြေညာသည်။
ငါ့အတွက်၊ တံပိုးမှုတ်သည့်နေ့၏ အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းမှာ ယေရှုကိုရည်ညွှန်းပုံနှင့် သူ၏ပထမဆုံးကြွလာချိန်တွင် ယေရှု ပြည့်စုံခဲ့ပုံဖြစ်သည်- သူ၏ လူ့ဇာတိခံယူခြင်း၊ အပြစ်ဖြေခြင်းအမှု၊ အသေခံခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် ကောင်းကင်ဘုံသို့ တက်ကြွခြင်းတို့ကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဤ "ခရစ်တော်၏အသက်တာ၌ဖြစ်ရပ်များ" အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလနှင့် သူ၏ပဋိညာဉ် (ပဋိညာဉ်ဟောင်း) ကို ပြည့်စုံစေရုံသာမကဘဲ အချိန်တိုင်းကို ထာဝရပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ယေရှုသည် နှစ်၏ဦးခေါင်းဖြစ်သည်၊ အထူးသဖြင့် အချိန်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောကြောင့်၊ ငါတို့၏တဲတော်ဖြစ်တော်မူ၏။ ပေါလုဤသို့ရေးသားခဲ့သည်– “မည်သူမဆိုခရစ်တော်၌ရှိလျှင် အသစ်သောသတ္တဝါဖြစ်တော်မူ၏။ ဟောင်းသွားပြီ၊ အသစ်ဖြစ်ပြီ”(2. ကောရိန္သု 5,17).
ယေရှုသည် နောက်ဆုံး အာဒံဖြစ်သည်။ ပထမ အာဒံ ကျရှုံးခဲ့တဲ့နေရာကို အောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပသခါပွဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ တဆေးမဲ့မုန့်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်သင့်မြတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များကို ဖယ်ရှားပေးသူ (တစ်ဦးတည်းသာ) ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပုသ်နေ့တွင် အပြစ်တရားမှ အနားယူခြင်းကို ရရှိသည်။ ထာဝရအရှင်သခင်သည် ယခုကျွန်ုပ်တို့အထဲ၌ တည်ရှိနေသကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်တိုင်းသည် မြင့်မြတ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်နှင့်ဆက်ဆံသော ဘဝသစ်တွင် အသက်ရှင်နေပါသည်။ ငါတို့၏ဘုရင်နှင့် အရှင်သခင်ယေရှုသည် တံပိုးခရာကို တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ မှုတ်ခဲ့သည်။